CentOS Linux 8.4 yave kuwanikwa uye idzi ndidzo shanduko dzayo | Kubva kuLinux
CentOS Linux 8.4 yave kuwanikwa uye idzi ndidzo shanduko
Darkcrizt | 03/06/2021 12:23 | Yakagadziridzwa ku 14/06/2021 23:05 | Kugoverwa
Mushure memwedzi misere yeshanduro yekupedzisira yakaburitswa kusunungurwa kwe iyo nyowani yekuvandudza vhezheni yekuparadzira CentOS 8.4 (2105) mariri shanduko dzakaitwa kubva kuRed Hat Enterprise Linux 8.4. Iri bazi reCentOS Linux 8 richaenderera mberi nekugamuchira nyowani nyowani kusvikira kupera kwegore, iro gare gare richizomiswa mukufarira Red Hat ichitarisa izvo zviwanikwa muCentOS Stream.
Uye ndezvekuti sezvatatotaura pano pane blog muzvinyorwa zvakasiyana, CentOS Stream inotsiva iyo yekare CentOS 8 pakupera kwegore, zvinokwanisika kudzosera kune zvekare shanduro dzepakeji uchishandisa rairo "dnf downgrade", kana paine shanduro dzinoverengeka dzechishandiso chimwe chete mudura.
Basa rakaitwa kubatanidza mazita ezvinyorwa (repositori), ayo anoderedzwa kuita mashoma (semuenzaniso, zita rekuti "AppStream" rinotsiviwa ne "appstream"). Kuti uchinjire kuCentOS Stream, ingo tumidza mazita mamwe mafaera mu /etc/yum.repos.d dhairekitori, gadziridza repoid, uye gadzirisa mashandisirwo e "-enablerepo" uye "-disablerepo" mireza muzvinyorwa zvako.
1 CentOS Linux 8.4 Makiyi Nyowani Zvimiro
2 Dhawunirodha CentOS 8.4
CentOS Linux 8.4 Makiyi Nyowani Zvimiro
Pamusoro pezvinhu zvitsva zvakaunzwa muRHEL 8.4, zvirimo mumapakeji makumi matatu neshanu zvachinja muCentOS 34 (8.4), kusanganisira anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit, uye yum. Shanduko kumaphakeji kazhinji dzinogumira pakudzokorodza uye kuveza kwehunyanzvi, pamwe neRHEL-yakatarwa mapakeji senge redhat- *, Insights-mutengi, uye kunyorera-maneja-kutama * zvakabviswa.
Sezvo muRHEL 8.4 ye CentOS 8.4, mamwe maAppStream module anoumbwa neshanduro nyowani Python 3.9, SWIG 4.0, Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13, MariaDB 10.5, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Zvishandiso 1.49.0 uye Go Zvishandiso 1.15 .7.
Iyo bootable iso inogadzirisa nyaya uko mushandisi akamanikidzwa kuisa pamurume girazi URL kurodha mapakeji Mune vhezheni nyowani, iyo yekumisikidza ikozvino inosarudza girazi riri padyo nemushandisi sezvo vanogadzira votaura kuti kune yakanyanya kushama traffic yakanangana neCentOS sosi RPM ichienzaniswa ne
binary RPMs, saka vanozviona zvisina kukodzera kuisa izvi zvirimo pagirazi rekutanga.
Kana vashandisi vachida kuonesa izvi zvirimo, vanogona kuzviita vachishandisa reposync rairo inowanikwa mune yum / dnf-utils package. Iyo sosi RPMs yakasainwa neiyo imwechete kiyi iyo inoshandiswa kusaina yavo yemabhinari.
Dzidzo dzakaburitswa kubvira pakaburitswa yekutanga kune vese architectures. Isu tinokurudzira zvikuru vese vashandisi kuti vashandise zvese zvidzoreso,
Nezve zvinozivikanwa nyaya Izvo zvinotaurwa kuti kana uchiisa iyi nyowani vhezheni vhezheni muVirtualBox, unofanirwa kusarudza iyo "Server ine GUI" maitiro uye shandisa VirtualBox isingasviki pane 6.1, 6.0.14 kana 5.2.34, nekuti zvikasadaro kuchave nematambudziko.
Uyewo, RHEL 8 yakasiya rutsigiro rwevamwe zvishandiso zvehardware izvo zvingave zvichiri kushanda. Mhinduro yacho ingave yekushandisa iyo centosplus kernel uye iyo iso mifananidzo yakagadzirirwa neELRepo chirongwa pamwe nemamwe madhiraivha.
Iyo otomatiki maitiro ekuwedzera AppStream-Repo haashande kana uchishandisa boot.iso uye kuisa pamusoro peNFS uye PackageKit haigone kutsanangura zvemuno DNF / YUM misiyano.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi vhezheni vhezheni, iwe unogona kutarisa izvo zvinyorwa mu inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha CentOS 8.4
Chekupedzisira kune vese avo vanofarira kugona kuisa iyi nyowani vhezheni yesystem vanofanirwa kuenda kune yavo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chako chekuburitsa unogona kuwana mufananidzo weiyo system, chinongedzo ichi. Mufananidzo uyu inowanikwa kuti iwe ushandise pane chero chinhu chemuviri muchina, pamwe nechero imwe application inobvumidza kugadzirwa kweanenge michina, senge VirtualBox kana Gnome Mabhokisi.
Kugovera kunoenderana zvizere neRHEL 8.4 saka CentOS 2105 uye zvivakwa zvayo zvakagadzirira kurodha kana iyo 8 GB DVD mufananidzo kana 605 MB netboot ye x86_64, Aarch64 (ARM64) uye ppc64le zvivakwa.
Iwo mapakeji eSRPMS pane ayo mabhaari uye ruzivo rwekugadzirisa dambudziko rwakawanikwa zviripo kuburikidza ne inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » CentOS Linux 8.4 yave kuwanikwa uye idzi ndidzo shanduko
Jami "Maloya" inosvika ine inovandudza interface, kubatana kwevatengi kweWindows neLinux uye nezvimwe
Chrome OS 91 inosvika iine faira rekutsigira rutsigiro, kugadzirisa kuchengetedzeka uye nezvimwe